तपाइँको आईफोनमा भ्वाइस नोटहरू कसरी सम्पादन गर्ने म म्याकबाट हुँ
अनुप्रयोगमा आवाज नोटहरू जुन हाम्रो आईफोनहरूमा नेटिभ ईस्टल भएको छ हामी यसबाट धेरै प्राप्त गर्न सक्दछौं, जस्तो कि हामीले पहिले नै तपाईंलाई अन्य अवसरहरूमा बताइसकेका छौं। Applelised; एक अन्तर्वार्ता वा एक वर्ग रेकर्ड देखि अप्रत्याशित रूपमा आउने ती विचारहरू लेख्न। आज हामी तपाईंलाई कसरी ती सम्पादन गर्ने सिकाउनेछौं भ्वाईस नोटहरू ताकि तपाइँ ती दुवै सुरू र अन्तमा समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एकदम सरल कुरा हो।
आवाज नोटहरू सम्पादन गर्दै
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एउटा सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभयो र नोट लिनुको सट्टा तपाईंले अनुप्रयोगसँग प्रदर्शन रेकर्ड गर्नु भयो आवाज नोटहरू वास्तवमै के महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा ध्यान दिन। निश्चित रूपमा सुरुमा, जब तपाईं रातो रेकर्ड बटनमा पहिले नै थिचिएको थियो, माइक्रोफोन असफल भयो र केहि सेकेन्डहरू थिए जुन रेकर्ड गरिएको थियो बेकार थियो। वा त्यो अन्तमा तपाईं हराउनु भयो र केही थप मिनेट रेकर्ड। ठीक त्यो क्षण मा र आफ्नो आईफोनबाट तपाईं सक्नुहुन्छ त्यो आवाज मेमो सम्पादन गर्नुहोस् यसको सुरूवात र अन्त दुवै छोटो पार्दै। यदि तपाईं द्रुत समय प्रयोग गर्नुभयो भने, विधि तपाईंलाई धेरै परिचित हुनेछ।
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् आवाज नोटहरू र यसमा र edit सम्पादन «मा क्लिक गरेर तपाईं सम्पादन गर्न चाहानुभएको रेकर्डि select चयन गर्नुहोस्।
"छोटो" आइकनमा थिच्नुहोस् जुन तपाईं दायाँ पट्टि देख्नुहुनेछ।
प्ले ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि विन्दु निर्धारण गर्न रोक्नुहोस् जहाँ तपाईं रेकर्डि playing प्ले गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईं रेकर्डिंगको बाँया र दायाँ दुबै दुबै रातो लाइनहरू देख्नुहुनेछ। बाँयामा रातो रेखा समाउनुहोस् र दायाँ तान्नुहोस् बिन्दु सेट गर्नका लागि जहाँ तपाइँ रेकर्डि start सुरू गर्न चाहनुहुन्छ। यो सहि छ कि छैन जाँच्न Play थिच्नुहोस् वा, यदि होईन भने, यो लाइन एक पक्ष वा अर्कोमा सार्नुहोस् जब सम्म यो समायोजित हुँदैन। अब दायाँ रातो रेखाको साथ पनि गर्नुहोस्, यस पटक यसलाई बाँया तान्नुहोस्, पोइन्टब्याक समाप्त हुने पोइन्ट फिक्स गर्नका लागि। निलो रेखा दायाँ सर्छ ताकि तपाईं सही बिन्दु जहाँ तपाईं ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं इच्छित सेटिंग्स को साथ समाप्त हुन्छ, प्रेस "छोटो" आफ्नो संपादन बचत गर्न।
त्यसो भए तपाईले दुई विकल्पहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईंले मौलिक रूपमा सम्पादन गरेको मूल बचत गर्नुहोस् (जुन अघिल्लो संस्करण हटाउँछ) वा नयाँ रेकर्डि asको रूपमा बचत गर्नुहोस्, ताकि तपाईं दुबै संस्करणहरू राख्नुहुनेछ। तपाईले चाहानुहुन्छ र voila छनौट गर्नुहोस्!
यदि तपाईं यसको प्रयोगको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने आवाज नोटहरू याद नगर्नुहोस्:
तपाईंको आईफोनमा भ्वाइस नोटहरू कसरी रेकर्ड गर्ने
तपाईंको आईफोनबाट भ्वाइस नोटहरू कसरी साझेदारी गर्ने
आह! र हाम्रो भर्खरको पोडकास्ट नभुल्नुहोस् !!!
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » म्याकको लागि अन्य अनुप्रयोगहरू » तपाईंको आईफोनमा भ्वाइस नोटहरू कसरी सम्पादन गर्ने
लोरेटो पिनो मोरेनो भन्यो
जब मैले नयाँ रेकर्डि asको रूपमा बचत गर्न विकल्प राख्छु यसले यसलाई बचत गर्दैन 🙁, यसले सूचीबाट यसलाई हटाउँछ र मसँग मूल मात्र हुन्छ।
Loreto Pino Moreno लाई जवाफ दिनुहोस्
गलत आवाज मेमो काट्नुहोस् र मैले नचाहेको बचत गर्नुहोस्, म कसरी मूल आवाजमा फिर्ता जान सक्छु? वा पहिले नै हराइसकेको छ?
मारिया डेल कार्मेन बर्नहार्ड भन्यो
शुभ रात्री! मसँग धेरै भ्वाइस नोटहरू सुरक्षित गरिएका छन् जुन केहि मिनेटको लागि फेरि प्ले हुन्छ र सुरूमा फिर्ता जान्छ, मलाई के हुँदैछ थाहा छैन …… म कसरी यसलाई समाधान गर्न सक्छु? मलाई द्रुत उत्तर चाहिन्छ किनभने मसँग पुन: उत्पादन गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू छन्
मारिया डेल कार्मेन बर्नहार्टलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! म भ्वाइस मेमो सम्पादन गर्दै थिएँ, सम्पादक बन्द थियो र यो पृष्ठमा थियो जहाँ मेरा सबै नोटहरू देखा पर्दछ र अब यसले मलाई नोट वा सम्पादन गर्न दिँदैन। माथिको हो। म के गर्न सक्छु?
लोरिसलाई जवाफ दिनुहोस्
लगभग तीन महिना पछि, अनन्त लूप एप्पल स्टोर फेरि खुल्छ